LIFESTYLE Archives - Postmandu
टाउको दुख्दा पेनकिलर होइन, यी घरेलु औषधि खानुहोस्
2022-03-05 2022-04-22 PostmanduLeaveaComment on टाउको दुख्दा पेनकिलर होइन, यी घरेलु औषधि खानुहोस्
शारीरिक श्रमको कमी, तनाव, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखाइको समस्या पछिल्ला दिनमा बढिरहेको छ । यो समस्याका कारण तपाईंको काम प्रभावित त हुन्छ नै बेवास्ता गर्दा ठुला समस्या समेत निम्तिन सक्छन् । हाम्रो बानी के हुन्छ भने टाउको दुख्यो कि पेनकिलरज खाइहाल्ने । अत्याधिक पेनकलिरको प्रयोग स्वास्थ्यको लागि राम्रो होईन । धेरै पेनकिलर […]
मापसेपछि किन हुन्छ ह्याङओभर ?
2022-01-27 2022-02-02 PostmanduLeaveaComment on मापसेपछि किन हुन्छ ह्याङओभर ?
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा मानिसको रोजाइमा छ, मदिरा। दुःख बिर्सिने र खुसी बाँड्न अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गर्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण टाउको दुख्‍ने, रिंगटा लाग्‍ने, वान्ता हुने, मुख सुक्नेलगायत समस्या उत्पन्‍न हुन्छ। त्यसलाई बोलीचालीमा ‘ह्याङओभर’ भन्ने गरिएको छ। ह्याङओभरबाट कसरी छुटकारा पाउने भन्‍ने समस्या आजको भने होइन। इजिप्टमा भेटिएको १९०० वर्ष पुरानो एउटा […]
पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्, पेट दुखेको हुन्छ ठिक
2021-06-21 PostmanduLeaveaComment on पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउने गर्नुस्, पेट दुखेको हुन्छ ठिक
व्यस्त जीवनशैली, गलत खानपिन र तनावका कारण पेट खराब हुन थाल्छ । यसको खराब असर हाम्रो पाचनप्रणालीमा पर्छ । यो समस्याबाट मुक्तिका लागि घरेलु उपाय नै भेटिन्छन् । दिनदिनै यी उपाय अपनाएर पाचनप्रणालीलाई सुधार्न सकिन्छ । आयुर्वेद विशेषज्ञ डा अबरार मुल्तानीले पेट ठीक पार्ने उपायहरू बताएका छन् । दुई गिलास पानीमा दुई चम्चा धनियाँको धूलो […]
दाँत चम्किलो बनाउने पाँच उपाय
2021-06-13 2021-06-13 PostmanduLeaveaComment on दाँत चम्किलो बनाउने पाँच उपाय
सुन्दर, सेतो र चम्किलो दाँतले अनुहारको सुन्दरतालाई अझै बढाउँछ । दाँत पहेँलो भयो भने यसले सुन्दरतामा कमि ल्याउँछ । दाँत कमजोर भएमा वा कालो, पहेँलो देखिएमा बोल्न र हाँस्नमा पनि समस्या हुन आउँछ । दाँत सेतो र चम्किलो भएन भने लज्जाबोध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । दाँत पहेँलो भएको समयमा कसरी यसलाई सेतो र चम्किलो बनाउने […]
शारीरिक श्रमको कमी, तनाव, बदलिएको व्यस्त जिन्दगीका कारण मानिसहरुमा टाउको दुखाइको समस्या पछिल्ला दिनहरुमा बढिरहेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । जसले गर्दा तपाईंको काम प्रभावित हुन सक्छ भने समयमै वास्ता गरिएन भने भने यसले ठूलो समस्या ल्याउन सक्छ । टाउको दुखाइका लागि तपाईले घरेलु उपचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ जसबाट तपाईंले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ । पुदिना माइग्रेनको […]
सह गोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन बिहे ?
2021-06-09 2021-06-10 PostmanduLeaveaComment on सह गोत्रीसँग किन गर्नु हुँदैन बिहे ?
हिन्दू धर्मले सहगोत्रीका बीच विवाह गर्न नहुने विधान गरेको छ । गोत्र भनेको वंश र कुल हो । प्रत्येक नयाँ पुस्तालाई गोत्रले जोड्ने काम गर्छ । जस्तो, कसैको भारद्वाज गोत्र छ भने त्यो व्यक्ति भरद्वाज ऋषिको कुलमा जन्मेको हो । विवाहमा गोत्रविचार अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो । वेदपुराणहरूमा उल्लेख हुने सप्तऋषिका सन्तान नै उक्त गोत्रधारी […]